ग्लोवल कलिजियटको वार्षिकोत्सव – Pokhara Voice
ग्लोवल कलिजियटको वार्षिकोत्सव
By Ghanashyam Lamichhane	 On ८ माघ २०७६, बुधबार २०:३५
पोखरा, ८ माघ,
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक मामिला योजना मन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर आफ्नै परिवेशको शिक्षा नीति लागू गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको शिक्षा नीति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुने भन्दै उनले शिक्षा प्रणाली पनि व्यवसायिक र वैज्ञानिक हुने समेत स्पष्ट पारे। पोखराको ग्लोवल कलिजियटको २४ औं वार्षिकोत्सव एवं रजत महोत्सव शुभारम्भ गर्दै मन्त्री गुरुङले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न अझै आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए ।
मन्त्री गुरुङले राज्यको शिक्षा नीति र प्रणाली एउटै रहेकोले राज्यले नीजि र सामुदायिक विद्यालयलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने तर निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले नपाउने भन्ने चर्चा सम्बन्धमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो हल्ला मात्रै हो । यस्तो कदापि हुन सक्दैन । सरकारी स्कूल र बोर्डिङ स्कूलमा पढ्दैमा पक्षपात गर्न मिल्दैन ।’ निजी विद्यनलयमा पढ्न धनी र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी गरिवको छोराछोरी हुन् भन्ने भ्रम अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा धनीका छोराछोरी पनि पढेका छन् । मुख्य कुरा सोंच परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’
मुलुक समृद्धि बनाउने ढंगले ने अवको शिक्षा नीति बन्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिए । मुलु समृद्धिका लागि नयाँ पिंढीलाई उपयुक्त शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । ‘अवको शिक्षा व्यवहारिक हुन जरुरी छ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘विद्यार्थीले पाएको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने बनाउनुपर्छ । तबमात्र मुलुक समृद्धितर्फ जान्छ ।’ पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. बुद्धिबहादुर थापाले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट निकै कम भएको भन्दै राज्यले अझै पनि यस क्षेत्रलाई महत्व नदिएको आभाष भएको बताए ।
उनले विद्यालय–विद्यार्थी–अभिभावक बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले मात्रै शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने भन्दै यसमा सबै सजक बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले पढेको विद्यालय, पढाएका गुरु र पढेको क्षेत्रलाई कदापि भुल्न नहुने समेत बताए ।
विद्यालयका प्राचार्य बाबुराम पन्तले निजी विद्यालयप्रति राज्यको दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसक्नु विडम्वना भएको बताए । निजी विद्यालयले सरकारकै अनुमतिमा, सरकारले नै बनाउको शिक्षा नीति लागू गरेका हुनेले फरक देष्टिकोण राख्न आवश्यक नभएको बताए ।
ग्लोवलले कलेज सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन दिएको वर्षौं वित्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसक्नु विडम्वना भएको भन्दै भउनले अब अत्तर्राष्ट्रिय कलेजका सम्बन्धन लिएर भए पनि कलेज सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पद्मराज ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अभिभावक डा. अर्जुन आचार्य, विद्यालयका उपप्राचार्य वेदप्रसाद शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।
उक्त अवसरमा विद्यालयमा १० वर्ष सेवा गरेका २१ शिक्षक, कर्मचारीका साथै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने ४ विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
सम्मानित हुनेमा उपप्राचार्य वेदप्रसाद शर्मा, शिक्षकहरू वसन्ती बस्नेत, शोभा क्षेत्री, भलबहादुर क्षेत्री, प्रकाश पराजुली, लक्ष्मी परियार, पवित्रा केसी, सुरक्षा श्रेष्ठ, सोनिका गौचन, वविता पालिखे, शुष्मा थापा, रेनु गुरुङ छन् ।
यसैगरी पूर्व शिक्षक प्रेम शर्मा, रेनुका थापा, सविता पौडेल र धनबहादुर गुरुङलाई पनि कार्यक्रममा सम्मान गरियो । कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षकद्वय नेपाल प्रकाश अधिकारी, वसन्ती बस्नेतका साथै विद्यार्थीहरू समुन्द्र क्षेत्री, ममता कुशवाह र आयुष्मा भण्डारीले गरेका थिए । कार्यक्रममा गायक रामभक्त जोजिजू, बाल गायक उत्प्रेम जोजिजूका साथै विद्यार्थीहरूले संगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति राखेका थिए । यस्तै कर्मचारीहरू कृष्णमाया गुरुङ, चन्द्रबहादुर थापा सपना खाँड र अञ्जना श्रेष्ठसमेत सम्मानित भए । साथै अघिल्ला वर्षमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू मनोज नेपाली, इशान ढकाल, दीक्षिका जिसी र सोचन थापा मगर पनि कार्यक्रममा सम्मानित भए ।
ग्लोवल कलिजियट २०५२ सालमा स्थापित भएको विद्यालय हो । विद्यालयमा शुरुको वर्षमै ५ सय १२ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । कक्षा ८ बाट शुरुआत गरेको विद्यालयले त्यसको ३ वर्ष अर्थात २०५५ सालमा ३० जना विद्यार्थीले पहिलो एसएलसी दिएका थिए, जसमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए ।
यसैगरी २०६३ बाट कक्षा ११ शुरु गरि व्यवस्थापन र २०६४ बाट विज्ञान संकाय सञ्चालन गरेको थियो । विद्यालयले छोटो समयमै महत्वपूर्ण फड्को मारेको प्राचार्य बाबुराम पन्त बताउँछन् । ग्लोवल अब कलेज संचालन गर्न तयार छ तर स्वीकृति कुरेर बसिरहेको प्राचार्य बाबुराम पन्त बताउँछन् । ‘विद्यालय सबै संरचनाले सुविधा सम्पन्न छ, अब संख्यामा भन्दा पनि अझ गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं’, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार विद्यालयमा हाल १ हजार ९ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १ हजार ९ सय विद्यार्थीलाई पढाउन १ सय ३८ जना शिक्षकशिक्षिका छन् ।
कक्षा १० सम्म प्रत्येक कक्षामा ३/३, ११ र १२ मा ६/६ वटा सेक्सन रहेको प्राचार्य पन्तले बताए । ग्लोवलमा अध्ययन गर्न चाहना राखेर आवेदन दिने विद्यार्थी संख्या हजारौं हुने उनले बताए । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याव, साइन्स ल्यावका साथै उच्चस्तरीय वेकरी समेत छ । यसैबीच २०५२ सालमा स्थापित विद्यालयले यो वर्ष विविध कार्यक्रम गरेर रजत महोत्सव मनाउने विद्यालयका प्राचार्य पन्तले जानकारी दिए । कार्यक्रमका लागि विद्यालयका उपप्राचार्य वेदप्रसाद शर्मालाई मूल संयोजक चयन गरेको छ ।
रजत महोत्सव यसरी मनाउँदै
विद्यालयले यस वर्ष विविध कार्यक्रम गरेर रजत महोत्सव मनाउने भएको छ । यस महोत्सवका लागि विद्यालयका उपप्राचार्य वेदप्रसाद शर्माको मूल संयोजकत्वमा विभिन्न कमिटी तयार गरिएको छ ।
रक्तदान कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीलाई सहयोग, अन्तरविद्यालय स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम लगायतका कार्यक्रम यस वर्ष गरिने प्राचार्य पन्तले जानकारी दिए ।
पन्तका अनुसार विद्यालयमै विविए सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको वर्षौं भैसक्यो । तर राज्यका निकायको सम्बन्धन करेर बस्नु परेको छ । ग्लोवलले कलेज सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन दिएको वर्षौं वित्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसक्नु विडम्वना भएको भन्दै उनले अब अन्तर्राष्ट्रिय कलेजका सम्बन्धन लिएर भए पनि कलेज सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिए ।
विद्यार्थीलाई निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षकहरूलाई दूरगामी र भरपर्दो प्रशिक्षण दिने पन्तले बताए ।